I-Raw Tadalafil Powder (171596-29-5) Abenzi & Abahlinzeki - Ifektri
I-Raw Tadalafil powder ngaphansi kwegama le-Cialis isetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi (ukungabi namandla) kanye nezimpawu ze-benign prostatic ………
Sukuhlushwa Tukushisa Gcina ekamelweni lokushisa eliphakathi kuka-59 ° F no-86 ° F (15 ° C no-30 ° C). Ungayigcini le mithi ezindaweni ezimanzi noma ezimanzi.
I-Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6, I-3,4] i-pyrido [1,4-b] i-indole-5-dione (i-Cialis), uhlobo lwe-PDE5 inhibitor kanye nesidakamizwa esilawulwa ngomlomo. It is a b-carboline derivative and is a structably structured from vardenafil (Levitraw) and sildenafil (Viagraw), womabili angama-PDE171596 inhibitors asuselwa kusakhiwo se-pyrimidine esihlanganisiwe. I-Tadalafil powder (i-CAS 29-5-2003) inyusa ukugeleza kwegazi kungene ku-corpus cavernosum ngokuphumuza imisipha yemithambo yegazi, futhi lokhu kwenza indoda ikwazi ukufeza ukwakhiwa. I-Tadalafil powder yamukelwa yi-United States (US) i-Food and Drug Administration (i-FDA) e-XNUMX ekwelapheni ukungasebenzi kahle (i-ED), futhi yathengiswa emhlabeni wonke ngaphansi kwegama lomkhiqizo i-Cialis. Ibuye isetshenziselwe ukwelapha umfutho wegazi ophakeme wamaphaphu kanye ne-benign prostatic hyperplasia, okuyisimo lapho indlala ye-prostate ikhuliswa khona, idale izinkinga ngokuchama.
Isici esihlukanisayo se-Tadalafil se-pharmacologic yimpilo yaso ende (amahora ayi-17.5) uma kuqhathaniswa neViagra neLevitra (amahora angu-4-5). Lesi sigamu sempilo eside senza isikhathi eside sokwenza futhi, ngokwengxenye, sibhekene nesidlaliso seCialis "sephilisi lempelasonto." Lesi sigamu sempilo ende futhi siyisisekelo sophenyo lwamanje lokusetshenziswa kwe-tadalafil ku-pulmonary arterial hypertension njengokwelashwa okukodwa nsuku zonke.
Le mpendulo iqondiswa ukukhishwa kwe-nitric oxide (NO) kuma-nerve terminals kanye nama-endothelial cell, avuselela ukuhlanganiswa kwe-cGMP kumaseli wemisipha abushelelezi bese ilawula ukunwebeka nokuncipha kwemithambo yegazi ethwala igazi liye nasesipondweni. I-cyclic GMP ibangela ukuphumula kwemisipha ebushelelezi nokwenyuka kokugeleza kwegazi kungene ku-corpus cavernosum, futhi kwehliswa uhlobo lwe-cGMP oluthile lwe-phosphodiesterase 5 (PDE5) ku-corpus cavernosum etholakala eduze kwepipi. I-Tadalafil ivimbela i-PDE5 futhi ngaleyo ndlela ithuthukise ngokwandisa inani le-cGMP etholakalayo. I-Tadalafil imisa i-PDE5 ekubhubhiseni i-cGMP bese inyusa i-cGMP etholakalayo yokufeza umsebenzi futhi ibangele ukwakhiwa ukuthi kuhlale isikhathi eside.
Kodwa-ke, njengoba isigamu sempilo yeTadalafil sifushane, umphumela wayo uyaphela phakathi nezinsuku ezimbili okwenza i-PDE2 ibuye futhi impilo yakho yezocansi - iye iba yimbi. Ungadinga ukuthatha isikhathi eside ukufeza umphumela owufunayo, njengamandla aphansi we-Cialis 5-4 izinsuku zezinsuku ze-5-4.
I-Cialis iza ngamathebulethi aphuzi, ambozwe ifilimu nama-alimondi kuma-5, 10 no-20 milligram (mg) amanani. Isilinganiso sokuqala esinconywayo se-Cialis powder ukuze sisetshenziswe njengoba kudingeka ezigulini eziningi yi-10 mg, ethathwe ngaphambi kokwenza umsebenzi wezocansi obulindelekile.
Powder I-Tadalafil powder ingasiza ukukhulula imisipha ku-prostate nasesinyeni sakho. Lokhu kungasiza ekuthuthukiseni izimpawu zakho ze-BPH.
Improve Ukwenza ngcono izimpawu ze-ED, i-tadalafil powder isiza ukukhuphula ukugeleza kwegazi kuye endondeni. Lokhu kungakusiza uthole futhi ugcine ukwakhiwa. Ukuze i-tadalafil powder ikusize ube nokwakhiwa, udinga ukuvuswa ngocansi.
♦ Ye-PAH, i-tadalafil powder isebenza ukuthuthukisa ikhono lakho lokuzivocavoca ngokuphumula imithambo yegazi emaphashini akho. Lokhu kwandisa ukugeleza kwegazi.
▲Ukukhubazeka kwesakhiwo sowesilisa, njengesifo sikaPeyronie
I-Tadalafil powder, i-sildenafil powder, ne-vardenafil powder konke kusebenza ngokuvimbela i-enzyme ye-PDE5, kepha lezi zidakamizwa zivimbela ama-enzyme we-PDE 6, 1, no-11 ngamazinga ahlukahlukene. Isibonelo, iSildenafil ne-vardenafil inhibit PDE6, i-enzyme etholakala esweni, ngaphezu kwe-tadalafil. Abanye abasebenzisi be-sildenafil babona i-bluish tinge futhi banokuzwela okuphezulu ekukhanyeni ngenxa yokuvinjelwa kwe-PDE6. Ngaphandle kwalokho, iSildenafil ne-vardenafil nazo zivimbela i-PDE1 ngaphezu kwe-tadalafil. I-PDE1 itholakala ebuchosheni, enhliziyweni, nasemisipha ebushelelezi yemisipha. Kucatshangwa ukuthi ukuvinjelwa kwe-PDE1 yi-sildenafil ne-vardenafil kuholela ekuvuselweni kwe-vasodilation, flushing, ne-tachycardia.